Fizahan-tany any Kaomoro amin'ny alin'ny alina: Konseritra mivantana, fandihizana ary karaoke, fitantarana, dihy folkloric ary barbecue goavambe
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kaomoro » Fizahan-tany any Kaomoro amin'ny alin'ny alina: Konseritra mivantana, fandihizana ary karaoke, fitantarana, dihy folkloric ary barbecue goavambe
Ny filoha lefitra Djaffar AHMED SAID HIDNI an'ny Komoro dia mitazona ny portfolio fizahan-tany ho an'ny firenena nosy. Hatramin'ny naha-birao azy dia miasa mafy izy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahantany eto amin'ny nosy ary nahasarika minisitra fizahan-tany maro tamin'ny hevitra vaovaony.
"Kaomoro amin'ny alina" dia natao hotontosaina amin'ny 21 sy 22 aprily ao amin'ny "Lac Sale", farihy rano masira anaty tanety izay faritana matetika ho farihy tsara indrindra amin'ny Ranomasimbe Indianina. "Alina nofinofy ao amin'ny Lake miaraka amina kaonseritra mivantana, fandihizana ary karaoke, fitantarana, dihy folkloric, tombola ary barbeque goavambe," hoy ny solontenan'ny fizahan-tany Komoro.
Vondron-nosy miavaka i Comoro ary mpikambana ao amin'ny Nosy Indianina Vanilla Vanilla. Ny "Lac Sale" dia fantatra ihany koa amin'ny farihy masinina "tsy misy farany" any avaratry Grande Comoros. Io dia farihy (kilasy H - Hydrographic) ao amin'ny Ile Autonome de Grande Comore (Grande Comoros) miaraka amin'ny kaody fonto misy an'i Amerika / Eropa Andrefana. Any amin'ny haavo 19 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina no misy azy.
Ny indostrian'ny fizahantany kaomoro dia mila fahitana misimisy kokoa amin'ny hetsika ara-kolontsaina anaovany fampahalalana amin'ny tsenan'ny fizahantany lehibe.
Sounds Air dia miisa amin'ny SABER amin'ny fitomboan'ny tokantrano
Ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-dranomasina dia mitohy mihombo hatrany any Seychelles